Interview with RajanKumar Neupane | 'मेरो क्षेत्रको विकासका लागि कृषि र पर्यटनको विकास गरी सम्बृद्ध पार्ने योजना छ'
Wednesday, 17 October 2018 09:48 am, Nepal
मेचीकाली : 2017-11-20 18:31:44
-राजमोका उम्मेदवार राजन कुमार न्याैपाने
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं २ निवासी राजनकुमार न्यौपाने यतिबेला सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधिसभा १ अन्र्तगत प्रदेशसभा २ का लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सदस्य रहनुभएका उहाँ विद्यार्थी जीवनदेखि नै अनेरास्ववियू (छैठौं) मा सक्रिय भई जिल्ला अध्यक्ष समेत सम्हालिसक्नु भएको छ । विद्यालय जीवनदेखि नै विभिन्न क्लब तथा संघसंस्थामा सक्रिय उहाँले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ । सुचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर न्यौपाने पत्रकारिता र प्रगतीशील साहित्यमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ । मिहनेती, इमान्दार, नैतिकवान युवा नेतृत्वको रुपमा आफुलाई विकास गर्नुभएका उहाँको सुचना प्रविधि सम्बन्धित कम्पनीका संचालन गरेर १० जना भन्दा बढी युवालाई रोजगारी पनि प्रदान गरिरहनु भएको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रही कामगरिरहेकाले प्रविधिको उपयोगले कसरी पर्यटक आगमनमा वृद्धि गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि उहाँमा राम्रो ज्ञान छ । आगामी चुनावका सन्दर्भमा राजमोका उम्मेदवार राजनकुमार न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी
कस्तो चल्दैछ तपाईको चुनावी गतिविधि ?
हामी चुनावी प्रचारका लागि पार्टीको नीति र कार्यक्रमहरु लिएर प्रचारात्मक अभियानमा निर्वाचन क्षेत्रमा गइरहेका छौं । माइकिङ्ग, पर्चा, व्यानर, सामाजिक सञ्जाल आदिको प्रयोग गर्दै मतदाता माझमा पुगिरहेका छौ । आम जनतामा यो चुनावको महत्व बुझाउदै क्षणिक फाइदाका लागि आफ्नो अमुल्य मत जाली फटाहा र राष्ट्रघातीहरुलाई नदिन आब्हान गरिरहेका छौं ।
बाम गठबन्धनको यत्रो चर्चा चलिरहेको बेला तपाईँहरुचाहि बामपन्थी शक्ति भएर पनि किन छुट्टै निर्वाचनमा गएको नि ?
राष्ट्रिय जनमोर्चाको बाग्लुङ र प्युठानमा बाहेक एमाले र एमाओवादीसँग अन्यत्र चुनावी तालमेल छैन । जहाँसम्म बाम गठबन्धनको कुरा छ, एकै किसिमका चरित्र र स्वभावका दुई पार्टी छुट्टाछुट्टै रहनुभन्दा मिलेर एउटै हुनु राम्रो हो । यसमा हाम्रो केही भन्नु छैन । सैद्धान्तिक रुपमा कम्युनिष्ट विचारबाट विचलित दुवै दलको तालमेललाई बामपन्थी गठबन्धनको हल्ला फिँजाएर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने जुन काम भएको छ, यसमा हाम्रो आपत्ति छ । यो गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा छैन । देशैभर जनमोर्चा चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभा १ र २ तथा प्रतिनिधिसभा १ को प्रदेशसभा १ र २ मा उम्मेदवारी दिएको छ ।
तपाईको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चालाई र तपाईलाई चाहि किन भोट हाल्ने ?
यो देशको राष्ट्रिय अखण्डताका लागि, जनतन्त्र र जनहितका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा निरन्तर सडकदेखि सदनसम्म संघर्षरत रहदै आएको छ । सधैभरि जनताका पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा लागिरहेको पार्टीलाई मत नदिएर विदेशी दलाल, देश बेच्ने, फटाहा, कमिशन खोर र जनविरोधी पार्टीलाई जनताले मत दिने कुरा नै आउँदैन । व्यक्तिगत र क्षणिक प्रलोभनमा परेर देशलाई विखण्डनको बाटोमा लैजाने काम सचेत मतदाताले गर्ने छैनन् । पैसा र गुण्डागर्दीको भरमा चुनाव जित्ने र जनताको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने पार्टी र उम्मेद्वारलाई मत दिनुभनेको आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु जस्तै हो ।
जहाँसम्म मलाई नै भोट किन दिने भन्ने सवाल छ, म राष्ट्रिय जनमोर्चाको कार्यकर्ता हुँ । भ्रष्टचार, जनविरोधी काम, तस्करी र राष्ट्रहित विपरीत काम नगरेको युवा उम्मेदवार हुँ । मलाई यहाँका हरेक गाउँ ठाँउका जनताको सुखदुखका बारेमा जानकारी छ । एक छाक खान दिएर, २–४ हजार पैसा बाँडेर वा व्यक्तिगत प्रलोभनमा पारेर मलाई अरुजस्तो भोट बटुल्नु छैन ।
मसँग मेरो क्षेत्रको विकासका लागि कृषि र पर्यटनको विकास गरी सम्बृद्ध पार्ने योजना छ । यहीको स्रोत र साधान प्रयोग गरेर प्रत्येक मानिसलाई अर्थ उपार्जनमा लगाउन सक्ने योजना छ । सुचना प्रविधिमा लगानी गरी यहाँका हजारौं युवा विद्यार्थीलाई रोजगारी दिनसक्ने कार्ययोजना छ । विश्वमा अहिले सबैभन्दा राम्रो र सहज रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसाय भनेको सुचना प्रबिधि र पर्यटन नै हो । जसको लागि हामीसँग पर्याप्त स्रोत छ । अन्य उद्योगका लागि हामीसँग पर्याप्त कच्चा पदार्थ नपुग्न सक्छ । त्यसैले कृषि, पर्यटन र सुचना प्रविधिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमात्र यहाँका जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । एकसाथ सबैले काम गर्न सकेमात्र हामी प्रगतिमा पुग्छौ । त्यसैले यो देशको रक्षाका र समृद्ध नेपालका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चालाई नै भोट दिनुपर्छ ।
तपाई अन्य दलका नेताभन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ, चर्चामा पनि कम हुनुहुन्छ, चुनाव जितिएला त ?
हो म उमेरमा अरुभन्दा सानो छु होला । मेरो चर्चा पनि कम होला । तर राजनितिक विचार र नीतिमा अरुभन्दा कम छैन । जनतन्त्र, जनहित र जन–जिविकाका सवालमा अनवरत लागिरहेको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको कार्यकर्ता भएकोले म दावीकासाथ भन्न सक्छु , राष्ट्रिय हितमा हाम्रो पार्टी जत्तिको इमान्दार न एमाले छ, न एमाओवादी छ, न कांग्रेस । यिनीहरुका पटकपटकका राष्ट्रघाती कामहरुको मुल्याङ्गकन गर्दै जनताले यसपटक राष्ट्रिय जनमोर्चालाई मत दिइ चुनाव जिताउने छन् । हामीले पाउने मतले यसपटक विशेष महत्व राख्नेछ ।
तपाइको पार्टी संघीयताको विरोध गर्छ, अनि यही संघीयताको कार्यान्वयनमा तपाईको उम्मेदवारी अनौठो भएन ?
हो हाम्रो पार्टीले संघीयताको विरोध गरेको हो र विरोध गरिरहेको छ । संघीयता नेपालले धान्न सक्दैन । यसैको कारणले जातिय, क्षेत्रिय विमेल गराइ द्वन्द निम्त्याउने छ र नेपाल आन्तरिक कलहमा फस्नेछ । प्रशासनीक खर्च धान्न नसकेर संघीय प्रणाली नै असफल हुनेछ । नेपालको भौगोलिक बनावट, सामाजिक परिस्थिति संघीयताको लागि अनुकुल छैन । जहाँसम्म संघीयताको कार्यान्वयनमा तपाईको उम्मेदवारी अनौठो भएन भन्ने कुरा छ, हामी पनि यही देशकाे नागरिक हाे त्यसैले स‌विधानकाे पालना गर्नु नागिरकको कर्तव्य हुन अाउँछ । चारैतिरबाट नेपालमाथि बढीरहेकाे बैदेशिक हस्तक्षेप राेक्नुछ । बल्लबल्ल बनेको संविधानको कार्यान्वयन गरि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु छ । सविधान स‌साेधनका लागि हाम्रो मत पुगे संघीयता खारेज गरेर विकेन्द्रीयतामा अाधारित शासन व्यवस्था लागु गर्नेछाै । संघीयताकाे विराेध निरन्तर गरिरहने छाै‌ । संविधानको कार्यान्वयन पश्चात पनि सडकदेखि सदनसम्म रहेर जनविरोधी, राष्ट्रघाती शासकहरुको विरुद्धमा खबरदारी गर्दै विखण्डनकारीहरुका देशघाती तथा जनघाती कदमहरुमा विरोध गर्दै जनतासामु यथार्थ कुरा जसरी राख्दै आइरहेका छौ त्यसरी नै राख्दै यो देशको पक्षमा पहरेदारी गर्न नै उम्मेदवारी दिएको हो ।
यसपटकको चुनाबमा विगतमा परीक्षण भइसकेका, झुठा आश्वासनका भरमा जनताको मत बटुल्न खोज्ने, जनतालाई भेडा ठानेर सामुहिक वा व्यक्तिगत भोटको मोलमोलाई गर्ने दल वा उम्मेवारलाई बहिस्कार गरौं । विवेक प्रयोग गरि, प्रलोभनमा नपरी आफु र आफ्नो मत राष्ट्रिय जनमोर्चाको गिलास चिन्हमा दिनुहुन अनुरोध गर्दछु । तपाईको अमुल्य मतको कदर हुनेछ, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दिनुभएको मतले तपाईले भविष्यमा पछुताउनु पर्ने छैन ।
ठोकर्पामा सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्र खुल्दै
मेलम्ची–धाप सडकका लागि ६४ करोड, ठेक्का प्रक्रिया शुरु